Afaka mahazo abs avy amin'ny yoga ve ianao? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Yoga ho an'ny abs - vahaolana pragmatika
Yoga ho an'ny abs - vahaolana pragmatika
Afaka mahazo abs avy amin'ny yoga ve ianao?
Eny,yoga afakaOmeoabs ianao, fa tsy irery. manaony yogairery no mahasoa arydiahamafiso ny votoatinao, saingy asa bebe kokoa no tokony hatao ivelan'nyny yogalaboratoaraYoga no maniryampio ny famaritana ny kibonao, fa rahaianareomaniry nyFaritrany pop, mifantoha amin'ny sakafonao sy ny fampihetseham-batanao.
Zahao ity lahatsoratra ity, ity dia teknika antsoina hoe mpanadio vavony gastric. Notsongaina tamin'ny internet ho fomba tsara handoroana tavy kibo, fa inona no tena fifanarahana? Eto handrava azy io dia ny mpanazatra an'i Halley Berry sy ilay matihanina amin'ny haiady Peter Lee Thomas. Niseho.
Salama, tongasoa indray. (Tehaka mpijery) Mipetraha eto ho anay ry Peter. Inona no atao hoe fanasana vavony? Io dia karazana fofonaina efa taloha izay efa an'arivony taona maro izay, efa antitra toy ny kodiarana ihany io.
Ary ao amin'ny rafitry ny yogas samihafa, ny moanina Shaolin no manao azy, ny yogis manao azy, ny olona indrindra amin'ny tontolon'ny yoga, fantatr'izy ireo izany. Tsy zavatra noforonina omaly ity. Tena mahavariana tokoa, indrindra raha manana olana amin'ny fandevonan-kanina ianao, izany dia hanampy anao hanomboka ny afo mandevon-kanina.
Ianao ve io? Izaho, eny Wow, somary tsara kokoa noho izany ianao noho ny fieritreretako ny sisa amintsika. Eny ary mazava ho azy fa tsy manana tavy intra-kibo manakana anao ianao. Tsy isika rehetra no afaka milentika anaty tsara.
Ary ny hevitra dia ny hitondrana ny vavony mankany amin'ny hazondamosina, ary izany dia somary mistery amin'ny olona maro, mieritreritra ianao hoe: 'Ahoana no hataonao eto an-tany?' Ary tena tsy afaka mifoka rivotra tampoka amin'ny tontolo andro isika, koa antenaiko fa hamporisika ny olona hifoka bebe kokoa izany. Andao ataontsika kely izany raha afaka mandositra kely ianao. Eny tanteraka.
Ka ny zavatra voalohany anombohako azy dia tena nitovy tamin'ny nataon'i Wim Hof, manam-pahaizana momba ny fisefosefoana izy, nantsoin'izy ireo hoe 'The Ice Man', namaky firaketana eran-tany ary ity dia iray amin'ireo teknikan'ny fofonainy. ? feno (minono mafy amin'ny rivotra) ary avy eo mamoaka fofonaina. (mibontsina mafy) Dia izay. Azonao atao amin'ny oronao na amin'ny vavanao fa miankina aminao izany. (misintona mafy amin'ny rivotra) (mamoaka mafy) (manintona ny rivotra) (mamoaka mafy) iray hafa. (mitsoka ny rivotra) mafy) (mamoaka mafy) Ka izao ny fofon'aina mahery izao dia hanomboka hanova ny simia ao amin'ny vatana.
Ankehitriny isika dia hiatrika bebe kokoa amin'ny fofon'afo Kundalini izay mandalo ny orona. (miaina sy mivoaka haingana) Izay ataonao dia ny mampiditra sy mivoaka ny vavoninao toy izany, marina? Tsy afaka mitroka ianao raha tsy-- Marina mihitsy. Mila miditra ao ianao.
Raha vantany vao nanomboka aho dia tsy nanana alikaola intsony, tsy nikatona mihitsy ny lalan-dranoko fa efa mazava be nanomboka teo. Na inona na inona antony, noho izay mendrika azy, heveriko fa io dia iray amin'ireo fomba fahandro mahagaga. Etsy ankilany, halako ny manontany an'izany, saingy mieritreritra aho fa misy olona sasany mijery izay te-hahita ny abs anao raha manao an'ity ianao. (Misento i Peter) Ho vonona ve ianao? Aza manodinkodina ny sandriko.
Iza no maniry hanala ny akanjon'izy ireo ny PLT? (Mitehaka sy mihoby ny mpijery) (Nimonomonona i Peter) Saingy hanampy izany, raha mbola manao an'io ianao, satria mifamatotra amin'ny zavatra mitranga ao amin'ny abs-nao. Miomana ianao, toy ny hoe mila primer aloha ianao rehefa mandoko, ka io dia prep. Dia toy izany indray, raha apetrakao eto fotsiny ny tananao, dia (mifoka sy mitroka haingana) ianao, marina? Ity no dingana voalohany.
Miaina amin'ny toerana misy azy mialoha isika, miaina fotsiny, miaina tanteraka, miaina amin'ny antsasany. Ary izao dia miditra amin'ny banga eto ianao, te-hivoaka ny rivotra rehetra (mitosaka tsimoramora) (tehaka ny mpanatrika) Toa tsotra izany, toa ny nataonao, tena elaela aho vao nanao an'io fihetsika tsotra io. Ny tiako holazaina dia iray amin'ireo zavatra ara-batana fotsiny, rehefa mijery an'i Peter mamoaka fofonaina ianao, mazava ho azy fa mamoaka ny oxygen rehetra ao amin'ny havokavokao ary mamorona toerana hisintomana ny vavony ao.
Mampalahelo fa ho an'ny ankamaroantsika dia tsy afaka manadio izany lavaka izany isika. Izahay dia tsy dia mahay manasa lamba toa anao. Fa raha ny olona te hanomboka fotsiny.
Mila manana fandrosoana ny fomba fiasa, tsy maintsy misy karazana fandrosoana ary ny iray amin'izy ireo dia, raha ny marina, niara-niasa tamin'i Tony Horton aho omaly, namono ahy tanteraka. Ary ny iray amin'ireo zavatra noresahinay dia ny maha-zava-dehibe ny fifohana rivotra sy ny fisefoana rehefa avy ary nanao savasana tena tsara tokoa izahay tamin'ny faran'ny fampiofanana. Ary ny fanaovana zavatra tsotsotra toy ny mitazona ny fofonainao ary mametraka ny fotoana dia tena goavana tokoa.
Satria mameno ny vatanao amin'ny O2 tsara ianao, ary izany karazan-javatra izany no hampiorina anao, ary averiko ihany, zavatra mandrakizay fotsiny izany. Ary Peter, heveriko fa vaovao tsara tokoa fa na dia tsy ataonao tsara toy ny misy anao aza izany dia mbola afaka mahazo tombony miaina lalina miaina ireo fanazaran-tena manampy amin'ny fanalefahana ny haavon'ny adin-tsainao ireo. Marina tokoa.
Tiako izany ary heveriko fa ny zava-dehibe indrindra dia ny mahatadidy ny herin'ny fifohana rivotra ary amin'ny fotoana rehetra izay vao tena miady saina ianao, makà fotoana kely hieritreretana ny fampihetseham-pisefoanao, hataontsika ao amin'ny tranonkalantsika. Tohizo ny asa tsara, tena tiko izy Misaotra tompoko. (Tehaka nataon'ny mpanatrika)
Iza amin'ireo yoga no mety indrindra amin'ny abs?
Ampiharo ireto 10 iretony yogaMampiseho hoFaritra
Plank Plank. Andao hatrehana izany, Plank Pose dia iray amin'ireony yogapose isika rehetra dia manana fifandraisana fitiavana / fankahalana.
Dolphin Pose miaraka amin'ny fampiakarana tongotra:
Star Plank (Side Plank Variation)
Fihetsiketsehana miakatra miakatra.
Valala antsasaky ny tsipìka.
Tongasoa eto amin'ny kilasy fampiofanana yoga iray hafa ary manana fanazaran-tena mahatalanjona ho anao aho izay hifantoka amin'ny tena kendrenao ny tanjonao. Farito tsara ireo abs ireo ho anao, hanao yoga mikorisa koa ianao mba hivelatra miaraka amin'izay dia hihena ihany koa ianao ary hiady amin'ny andilanao ary amin'ny sakafo madio dia mampanantena fa hahita valiny amin'ity lahatsoratra ity ianao. Rehefa vonona ianao, dia makà ny rano ianao, andao hanao azy ry zalahy, ka anio dia hanomboka hipetraka amin'ny ombelahin-tongotr'akanjo ianao, maninjitra ny sandrinao mandroso, mitsoka ary mifoka rivotra, mihodina amin'ny toerana voalohany misy antsika amin'ny 2 1 ny fihodinanan'ny lohalika iray, nitazona ny tongony aoriana mahitsy izahay ary namela ny vatana ary nanosika in-4 andao hitazona ny 4 eto, apetraho eo ambanin'ny dianao ny rihiben-tongotrao, hitondra anao ho amin'ilay alika iray mitsivalana ambany tongotra Ho an'ny ny fanazaran-tena manaraka, ataonao aloha ny mandehandeha ny lohalikao ambony avy eo am-pandriana avy eto ary mitondra ny lohalinao mankamin'ny tratranao, avy eo maninjitra miankavanana, ankizilahy Touch 4 fotoana mialoha Atosiho ny lohalinao mankany amin'ny tratranao Pulse mandroso manomboka eto 5 6 7 8 Ahinjiro miakatra Manitatra ny tongotra ary avelao hidina, esory ny ombelahin-tongony ary atosiho izay rehetra vita dia ampidinina ny zanak'omby amin'ny tendron'ny rantsan-tongotra ary avelao ny fidinana ambany ambany ambany araka izay azo atao amin'ny gorodona. , mihodinkodina eo alohany, maka azy, miboridana dandasana, azonao ovaina izany raha te-handray lalina b manaova fofonaina, miaina, midina, mijere, alika kely, midina, mandohalika alika, miverina amin'ny lafiny hafa, tongotra havanana, mivoaha, sandry havia, miakara miakatra Aza misintona ny tafika an-damosina.
Manaova fihetsehana, mifoka ary avy eo mamoaka fofonaina, ny zaza dia hikapoka, hamoaka, hamoaka, ary hamela, handray ny tananao, haka ny fandohalohanay mandohalika in-4, vita eto dia napetrakay tamin'ny alika tongotra iray ny tongotrao ny ilany ankavia, mihinjitra voalohany eto mankany amin'ny lohalika mankany amin'ny vatan'ny tratra, in-4 eto isika dia mihamangatsiaka ary mikapoka ny lohalika amin'ny 1 2 3 4 manitsy ny tongotrao, mamela, manatrika ny alika, mandroso, alika midina, alika afaho, mandroso, tazomy ny planko dia tadiavo ny mandanjalanja, ny fanazaran-tena manaraka dia antsoina hoe soavaly soavalinao, mitondra ny lohalinao ho any amin'ny tratranao ianao ary mandroaka ny tongotrao any an-damosinao vonona handohalika izahay ary hampahatsiahy anao ny mpandaka fa mifandimby miakatra ny tongotra. alika midina alika manipy mandroso fanatanjahan-tena manaraka ny iray hafa, afa-tsy ny tongotra no mihantona amin 'ity ary tsy avela gochest sy kickwere mandohalika lohalika ary mandaka asa be fiovana legchest sy upfreeze chaturanga dandas anadown-akanjo dogexhale avelao handroso ao amin'ny sisiny mametaka ny tongotrao raha y tsy maintsy ovainao ny daka-kitrokelinao ary ampiharo manaraka ilay mahery fo gitara Armall anao Hitendry gitara aho amin'ny boribory mahitsy mandroso ny tongotra havia mankany an-danitra antsoina hoe anao Spiderman Crunch Mikasika ny lohalika ankavia amin'ny kiho havia ao ny zana-kazo in-5 ary avy eo mandroso miankavia hianjera eo anelanelan'ny tanana ny lohalika aoriana miverina 4 misokatra amin'ny lavaka avo Spinderman Crunch Mikasika ny kiho ankavanana mankany amin'ny lohalika ankavanana ary ahinjiro miverina 1 lehibe kokoa Dingana manaraka ny tongotrao ankavanana, avelao handeha ny tongotrao, avelao ny sandrinao, tazony ny sandrinao, alao ny ambany ambany, atsofohy ny lamosinao ary avelao ny lohalinao hitsingevana ary ankehitriny pulse 10, ahinjiro ny lohalinao avo, avohay ny vatanao, ary avelao aloha. miverena mankany amin'ny Chaturangaflow, mandrosoa mikorisa ts manome tsininy ireo fehin-tànanao El tazony ny tsorakao ataonao eto ary miaina fanazaran-tena an-dranomasina antsoina hoe dolphin plank, ny hataonao dia ny mampiakatra ny valahanao amin'ny rivotra ary avy eo alatsaho eo amin'ny sisin'ny hazo fisaka etsy ambany ireo ary atsangano roa isaky ny avy ary telo isaky ny miverina ianao rehefa mitazona plankexhale sy tsara tarehy loatra, tongava saika amin'ny handshaturanga, alika ambony sy alika ambany, mankanesa any amin'ny zanakao, ary avy eo mandohalika miadana miakatra avy eto, mandohalika mihazona ny fihetsika rameva, tànana eo an-damosinao na hatrany amin'ny voditongotrao, ahetsiketsika ny valahanao mankany aloha, ahetsiketsika mankany aoriana ny lohanao, hipoka ny lamosinao aloha, ento tsy miandany ny hazondamosinao, mipetraha eo amin'ny voditongotrao ary raiso moramora asa hafa tsy misy zaza anio ry zalahy a! mirehareha amin'ny tenanao amin'ny fampiofanana yoga plank mahafinaritra, mihodinkodina miadana ianao, misaotra, tompom-pitiavana maro
Afaka mahazo abs ve ianao afaka 30 andro?
Mahazo abs mandritra ny 30 androdiairayny tanjona mahazatra indrindra amin'ny fahasalamana. Na dia azo atao aza izany rahaianareoeo amin'ny toerana mety indrindra nyAzaio, ho an'ny ankamaroan'ny olona, ​​indrindra ny vaovao momba ny fahasalamana, tsy azo atao izany.17 apr 2020
Inona no mitranga ry zalahy? Jeff Cavaliere, ATHLEANX.com. Ka inona no ataonao ao anatin'ny 22 andro? Manantena aho fa izay hasehoko anao eto anio.
Niaraka nanao fanazaran-tena momba ny abs mandritra ny 22 andro aho. Hainao ve fa? Notsorinay daholo ny zava-drehetra satria hanala ny fialantsiny sasantsasany aho. Tsy hampiasa fitaovana na hiasa saina amin'ireo karazana fanatanjahan-tena isan-karazany izahay.
Hanolotra fanazaran-tena mifanaraka aminao amin'ny fahaizanao izahay ary hifidy 22 andro ho androko sy tanjoko satria fantatray fa maharitra 22 andro vao mamboly fahazarana. Raha afaka mifikitra amin'ity fampihetseham-batana ity ianao dia tsy ho ela izany - raha afaka manao io fanazaran-tena io 22 andro misesy ianao, iza no mahalala? Angamba handeha ho any amin'ny vatana vaovao fanoloran-tena amin'ny fahasalamana ianao satria afaka mihazona izany. Hamboarinay amin'ny ambaratonga misy anao izao.
Izahay dia manao izany amin'ny alàlan'ny fampiofanana amin'ny fomba lany tamingana. Noho izany, amin'ny alàlan'ny hafanam-po dia omena tanjona voafaritra tsara ianao, na fotoana voafaritra hifantohana sy hiezahana haharitra amin'ny fampiharana tsirairay. Fanazaran-tena enina eto izay manaraka ny fivoaran'ny ara-dalàna ny kibontsika.
Raha vitanao ny mamaky an'ity indray mitoraka ity dia hahazo fihodinana hafa ianao. 10 segondra ary mihoatra ny fanazaran-tena. Ireo mianatra mandroso dia afaka manao izany ary afaka miatrika fanamby amin'ny farany na manao ahoana na manao ahoana fandrosoany mieritreritra.
Raha mandroso bebe kokoa ianao, dia mety maty any amin'ny toerana misy anao eo am-piandohan'ny fampihetseham-pialanao, azonao atao ihany ny manandrana izany. Raha mila fampihetseham-batana abs ho solony ianao dia hampifandraisiko eo ambanin'ny famaritana etsy ambany ny iray, fa raha te hanandrana ianao dia mankanesa any! Raha vao sambatra ianao no lany tamingana tamin'ny fanazaran-tena tsirairay, dia ahoana? Mbola mahazo fampihetseham-batana tsara ianao. Ka ry havako, apetrako miaraka daholo ny fanazaran-tena mba hilazako izay mety ho an'ny tsirairay.
Tadidio fa hanana toeran-kivoahana hafa isika. Andao hanomboka. Okay, fi fanatanjahan-tena voalohany: ombelahin-tongony mankany amin'ny seranana.
bisikileta fitetezana tour de france
Manana fanazaran-tena amin'ny kibo ambany izahay. Fa maninona Satria raisintsika ny tapany ambany ary atsofontsika amin'ny tapany ambony mafy. Ka amin'ny ombelahin-tongoko mankany amin'ny lanitra dia azonao atao ny manao azy eto, rehefa Raha vao manomboka ianao ary te-hanandrana an'io, dia manana zavatra roa hatao ianao.
Te-hanosika ny tenanao ambony ianao, mahitsy amin'ny valindrihana, ary ny valahanao hiala amin'ny tany, izay somary mandroso kokoa. Ataovy mandritra ny 45 segondra. Io no haavon'ny hafangaro anao.
Averina indray fa tsy maninona raha tsy vitanao ny mamaky azy tanteraka. Hiroso avy hatrany amin'ny fampiharana manaraka ianao. Raha ataonao mandritra ny 45 segondra dia omena fitsaharana 10 segondra ianao dia tsy maintsy averinao ity fanazaran-tena ity.
Ataonao hatrany izany, miala sasatra mandritra ny 10 segondra aorian'ny famitana tsirairay, mandra-pandranao ny 45 segondra, ary avy eo mandroso amin'ny ambaratonga manaraka ianao. Hitanareo, izao no fomba hihaonantsika amin'ny olona manana ny fahaiza-manao rehetra. Tsy misy afaka miala amin'ny fanazaran-tena tsotra eto.
Mitohy izany, manomboka mihodina hatrany ambany ka hatrany ambony. Mihetsika indray ny tapany ambany, mihodina amin'ny tapany ambony raikitra ity. Izahay dia manao izany amin'ny diantsika mamaky ny hazo fisaka.
Ka jereo, eto no itondrantsika ny vatantsika, mihazona ny tampon'ny vatantsika eto isika amin'ny alàlan'ny fihazonana ny felatanantsika hifandray amin'ny gorodona ary ny sorontsika manondro ny gorodona. Saingy hodiovintsika ny valahantsika rehefa mandalo azy aho, mifandimby. Handany fotoana fongana 45 segondra izahay.
Raha azonao atao ny mihazona ny 45 segondra manontolo dia ataovy indray mandra-pahatonganao tsy afaka intsony. Manaraka, ndao hiroso amin'ny hetsika afovoany isika. Eto dia te-hikapoka ny ambony sy ny ambany isika ary hiara-hiasa, azontsika atao izany amin'ny antsointsika hoe crunch X-Men.
Sambany ny fandringanana dia tsy tanjon'ny fotoana fa tanjona miverimberina. Saingy azonao izao ny dikan'izany. Ny tanjon'ny rep eto dia 12.
Hanao an'ity fanazaran-tena ity ianao eto. Tsy mora izany, saingy tsy afaka mahazo toerana feno toerana V ianao eto. Ny tongotrao sy ny tananao fotsiny no tadiavinao miaraka ary avy eo miverina amin'ilay toerana 'X', tongotra misaraka ary miverimberina miisa 12 eto dia ny tanjonao lany tamingana, mila mikapoka ny hozatra mivalona ihany koa izahay satria mazava ho azy fa lazaiko anao daholo fotoana.
Mipetaka amin'ity tapany afovoany ity izy ireo. Ka ny ataonay dia kofehy mifandimby ny fanjaitra. Ny kofehy mifanolo amin'ny fanjaitra dia handray ny kofehy Ny fanazaran-tena fanjaitra nasehoko teto taloha, ary ianao 'Mandeha mifanohitra izahay, mifandimby havia sy havanana.
Ka ento eto izy, mahatratra ny lanitra ianao, avy eto dia mila kofehy ny fanjaitra ary tonga eo ambaniny. Aza very fandanjana. Avy eo dia mivoaka indray isika, midina, mipetraka ary avy eo mamerina amin'ny lafiny mifanohitra.
Mandrosoa hatrany, midina, mandrosoa, miverena, mipetraha eo afovoany ary miverena. Ny famongorana eto dia famerimberenana, indray mandeha. Misy 10 amin'ny lafiny roa.
Jereo raha mahavita hatramin'ny farany ianao. Raha afaka ianao; asa tsara. Nahazo 10 fanampiny fotsiny ianao amin'ny lafiny roa.
Raha tsy izany dia hiroso amin'ny fampiharana manaraka ihany isika. Eny ary, manana roa hafa isika eto. Ny hetsika ambony ka hatrany ambany no voalohany.
Inona no horesahintsika 'Raha ny ambony no miorina ambony sy ambany mihetsika, dia manandrana mitazona ny ambany izy araka izay azo atao ary esory ny ambony ambany. Ankehitriny ny jackknife dia hamela antsika hanao izany. Misy fihetsika kely kely amin'ny tongotra, fa tsy io no tena ifantohana.
Ka eto no ahatongavantsika amin'io toerana io, namoaka ny tananao ianao ary namoaka ny tananao, ary amin'ny ankapobeny ianao dia hiakatra, manao crunch avy any ambony, avelao ny tongotra hihetsika somary avo kokoa noho ilay iray hafa, milamina indray , ary mandehana mankamin'ny ilany. Mandehandeha etsy sy eroa foana ianao. Tonga izao ny fotoana.
Miezaka mandeha eo amin'ity jackknife ity izahay mandritra ny 45 segondra. Andao isika hitady azy. Ataovy izay azonao atao.
Raha tratry ny fandringanana ianao dia hanana fanazaran-tena iray sisa. Eny ary, farany tsy maintsy miakatra any ambony isika mba hananana d indray fa tamin'ity indray mitoraka ity dia mihodina. Ataontsika amin'ny antsoina hoe bisikileta mijanona izany.
Mandeha bisikileta matetika ny olona, ​​ary mitaingina haingana dia haingana izy ireo ka tsy mifantoka na mampihetsi-po ny hozatra amin'ny fomba tena mifantoka, na amin'ny ergometera dia voatery manao an'izany isika. Ka mandry eto amin'ny tany aho, ny lohalika mankany 90 degre, ny tanana mandeha ao aorian'ny lohako, mifikitra na misintona ny vozoko, ary ny zavatra ezahako atao dia mitazona fikafika kely eto an-tampony aho - efa nifanekena - nesorina tamin'ny gorodona, ny soroka dia nesorina tamin'ny gorodona ary manandrana mihodina amin'ny sisiny mankany amin'ny lafiny hafa aho. Kiho iray mankany amin'ny lohalika mifanohitra, ny kiho iray mankany amin'ny lohalika mifanohitra.
Aza afindra ny tapany ambany. Tehirizo io fijanonana io, ka io no anarany. Fa amin'ny ankapobeny dia te hahazo antoka isika fa mihodina avy any ambony ka hatrany ambany.
30 segondra izany. Tsy mora izany; mafy kokoa noho ny fikapohana ny reps amin'ny iray amin'ireo bisikileta mahazatra io. Hanao be dia be ianao amin'izany. 30 segondra 30 fongana.
Raha vitanao hatramin'ny farany - ary tena, raha tsy vitanao hatramin'ny farany dia tapitra ny fampihetseham-batanao. Tsara izany ao aminao. Mora indray.
Hofoanantsika daholo ny fialan-tsiny rehetra. Ny fitaovana, ny fiovaovan'ny fanatanjahan-tena, saingy tsy mora. Heveriko fa tsy tokony ho mora izany.
Tsy misy zavatra sarobidy tokony ho mora. Andramo izany, na inona na inona haavon'ny fahaizanao. Raha afaka miasa lavitra mandritra ny 22 andro ianao dia araraoty izany ary manomboka.
Ry vahoaka, raha mitady programa izay hampiverina ny siansa hiasa ianao dia ampiofano arak'izay tokony hataonao, ataovy araka izay tiany ny hozatra; Mandehana any amin'ny ATHLEANX.com ary mahazoa ny programa fampiofanana ATHLEANX. Izay no nolazaiko.
Manofana anao toy ny atleta izahay. Topi-maso kely fotsiny ity. Mandritra izany fotoana izany, raha hitanao fa mahasoa ilay lahatsoratra, azafady mba avelao eto ambany ny fanehoan-kevitrao ary ataovy ankihibe fantatro izay tianao ho hita eto amin'ity fantsona ity, ary hanao ny tsara indrindra vitako aho handrakofana azy ho anao mandritra ny andro sy herinandro maro avia.
Tsara izany, mirary soa. Mandra-pihaona.
Manome anao fonosana 6 ve ny yoga?
Tsy toy ny sit up sy crunches nentim-paharazana, ny hetsika rehetra ao amin'ny Slacklineny yogamiasa ny fotony miaraka amn'ny sisa amin'ny vatanao, manao azy ho ivon'ny hery misintona. Ity fifandanjana tsiranoka ity diamahazo anaofaenin--entanafa tsy ho fampisehoana fotsiny izy ireo.9 Jul 2015 g.
Fa misy inona daholo? Tongasoa eto amin'ny andro fahenina amin'ny 30 andro yoga miaraka amin'i Adriene, izaho Adriene, ary anio, amin'ny andro fahenina, miantso ny 'Mason'ny Tigra'. 'Hanao fonosana enina fonosana isika! Sangisangy izany. Raha fantatrao aho, dia fantatrao fa tsy tena manome an-tsoratra na hisoratra anarana amin'ity faniriana tanteraka ity aho.
Fa te hampiofana ny atiko aho ary te hahatsapa ny abs, ny abs. Hanampy ahy hampihatra ny yoga izany. Hanampy ny lamosiko io ary zavatra kely fotsiny hanalana ny fiainantsika amin'ity fanamby mandritra ny 30 andro ity.
Aza matahotra. Makà rivotra lalina dia hanomboka isika. Okay ry namako Ka anio isika dia hiambina.
Raha manana sakana ianao dia azonao atao izany. Mety ho mora ampiasaina izany. Raha tsy manana ianao dia tsara.
Azonao atao ny mampiasa ny eritreritrao ary afaka mandeha ihany koa izahay. Ka raha manana ianao dia raiso izao. Raha tsy izany dia tsara.
Hanao yoga kely ianao amin'ny sary an-tsaina. Ka ndao hihaona eto amin'ny toerana miverina miverina. Raiso am-pofoana ny lohalinao ary manaova fofonaina lalina feno fankasitrahana, feno fifaliana sy fanetren-tena mizara ity traikefa ity aminao, mitarika anao ary mahita indray ny vatanay ary miverina amin'ny tenantsika tsara indrindra.
Ny sasany amin'ireo fihetsiketsehana ireo dia mety hahatsapa toy ny hoe, 'yoga ve ity?' 'Adriene?' Ary hoy aho hoe: 'Eny, ny zava-drehetra dia mihevitra ahy ho yoga rehefa mampifandray ny saiko sy ny vatako, ny saiko ary ny fofoko.' Koa mamporisika anao aho mba hiala voly, aza manandrana mandray azy Matotra loatra. Raha mila miala sasatra ianao dia miala sasatra.
Okay? Nikoropaka ny rehetra. Sangisangy izany. Okay.
Ka eto isika dia manosika ny lohalintsika mankamin'ny tratrantsika ary mahita ity fiolahana tsara tarehy ity fotsiny. Azonao atao ny mihifikifi-kely sy miverina rehefa manotra ny lamosinao ambany. Azonao atao ny mandady kely ny sorokao mba hidina kely mankany amin'ny foton'ny hazondamosinao mba hamoronana toerana kely eo anelanelan'ny sofinao sy ny sorokao, ary koa ny saokanao sy ny tratranao, izay mivelatra amin'ny tendanao.
Kin .Cool. Avy eo dia mamakivaky ny rantsan-tanantsika isika ary mitondra azy ireo aorian'ny lohanay, mamaky elatra lavitra mankany amin'ny tratranao, ary azonao atao aza ny mandroaka ny rantsan-tongotrao im-betsaka.
Ka jereo fotsiny izany fifandraisana mahafatifaty eo amin'ny hazondamosina sy ny tany izany, ka tena atositosiho hatrany ambany fandriana ny ambany. Tena hivelatra ny kiho eto. Handeha hisintona ny lohaliko aho ka tafapetraka ambonin'ireo teboka eo am-balahako izy ireo, na angamba somary lavitra kely fotsiny mba hiantohana ny fikapohan'ny lamosiko ambany amin'ny fandriana.
Ka tena manohana eo ambany aoriana ianao anio. Avy eo hihantona amin'ny lohaliko aho, ary ny shins dia mety hitovy amin'ny valindrihana. Raha manana sakana ianao na tsy manao aza ianao dia tsy olana izany.
Azonao avela hitombo ny fisainanao ary mbola hitanao ny fametahana. Fa raha manana sakana ianao dia azonao atao ny mamoaka izany, na izao no fomba fiasa, arakaraka ny toe-batanao. Ary mahita fotsiny ny mangana kely amin'ny tongony.
Eny, mbola tsy nanao zavatra akory aho, ary niditra tao amin'ny Uddiyana Bandha aho ary nanintona ny foitra tao am-poko. Tena hiverina lalindalina kokoa amin'ny tany aho. Ary avy eo manidina eto ny sikuako satria be loatra ny zavatra tiako hifantohana, fa handray ny fiainana ny yoga manontolo aho.
Ary ho hitanao fa somary mora kokoa io, angamba amin'ny fanidiana ny masoko sy ny fanodikodinana ny kitrokeliko. Ahinjitra ny ankihiben-tànako. Ny ankihibenko aza ampiasaiko mba hanomezana otra malefaka kely ho an'ny tenako.
Nihomehy aho momba ny 'oh, abs pack enina' ho an'ity lahatsoratra ity, fa ny tena izy dia mbola eo am-piasana traikefa amin'ny vatana iray manontolo izahay izay mandefa fofonaina sy angovo ho an'ny lehilahy maratra rehetra. Atosinay midina mankany amin'ny hazondamosina ny foitra, atsanganantsika ambony ny rambony, tsara sy malalaka ny kiho.
Miaina lalina. Rehefa mamoaka fofonaina ianao dia atsangano ny lohanao, tendanao, soroka ambony. Tohero ny faniriana hibontsina eto.
Ataovy tsara sy malalaka ny kiho. Alao sary an-tsaina ny voankazo iray lehibe sy be ranony na zavatra eo anelanelan'ny saokanao sy ny tratranao. Amboary ny fijerinao rehefa miakatra eto ianao. Makà azy.
Jereo ary avereno jerena mba hahafahanao mitazona azy ho tsara sy misokatra. Manafika ny kibo izao. Alao antoka fa vita ny lamosina ambany.
Kitiho ny sakana na kitiho ny sakana. Mifoka rivotra. Atsangano ambony kely kokoa.
Asandrato ny saokanao, avo ny fonao. Alefaso ambony ny masonao ary avereno mivoaha. Ity Makà fofonaina lalina, miala sasatra.
Tsara daholo. Ka hifindra sy hivoaka isika, fanazaran-tena yoga kely izay tena mamorona traikefa amin'ny vatana manontolo. Ampiasao ity sakana ity.
Ataovy malalaka ny kiho. Andao. Mitsofoka, misento.
Mivoaha, manainga. Mifofofofo, ambany. Mamoaka, mampiakatra.
Mifofofofo, ambany. Mamoaka, mampiakatra. Ataovy malefaka sy mora foana izy io.
Aza hadino izany ry zalahy. Topazo maso ny lahatsoratra iray segondra. Sorohy izany.
Oh! Mamorona fihenjanana fotsiny ianao Eny, miasa ny abs-aho, saingy karazana tsy fanarahan-dalàna amin'ny vatako sisa aho. Ka ndao hitazona ny fahamendrehan'ny traikefa amin'ny vatana feno rehefa mahazo ireo abs isika, okay? Tsy mino aho fa nanao an'izany aho. Fahafinaretana vitsivitsy eto amin'ny andro fahenina! Makà fofonaina lalina ary manaova fofona.
Andao. Asandrato. Mifoka rivotra.
Ataovy malemy ny hoditra. Mivoaha, manainga. Mitsofoka, avelao handeha.
Mivoaha, atsangano ary tsindrio. Ary tazomy amin'ny tendanao ny ankihiben-tànanao amin'ny gadonao manokana. Tohizo toy izao.
Akimpio ny masonao dia mitsiky ianao. Ataovy malalaka ny kiho. Raiso ra vaovao, oksizenina vaovao ao anaty rafitra.
Ataovy miaraka ny tongotra roa hafa 'Mandohalika tsara sy malalaka. Raha manana sakana ianao dia azonao atao ny maka izany mihoatra ny lohanao. Ampiasao toy ny ondana.
Raha tsy izany dia aza manahy. Andao isika hitondra ny tanantsika ho any amin'ny vavonintsika mba hahazo pat. Mialà sasatra ny lanjan'ny tongotra ary jereo fotsiny izay tsapanao.
Diniho izay nataon'ireo fofon'aina lalina ireo dia zahao fotsiny. Tsara. Andao horaisintsika ny sakana ary ento eo anelanelan'ny vodin-tongotray.
Ary raha tsy manana sakanana ianao dia miara-mihidy ny vodin-tongotrao fotsiny. Ka mety ho toa izao, na mety ho toa izao. Ary hataoko tsy misy, mba ho rariny fotsiny, horaisiko eo ambanin'ny vodiko ny tanako, oroka ankihibe eto.
Ary alefako tsara ny tongotro. Ka na ataoko am-paingotra azy io, na apetako eto ny sakanako, na ny feny aza, dia handeha tokoa, sa tsy tena mahatsapa tsara izany amin'ny valahako aho. Ka na eto ny namako na miaraka izahay.
Mitovy ihany. Hampiasa ny fofonainay izahay. Hiaina an-tsokosoko isika, handray ny rambony.
Hampiasa ny fofonaintsika mankany amin'ny lanitra isika. Exhale. Ampiasao ny faharetan'ny fofonainao hampihena ny tenanao.
Tsindrio ny tongotrao. Avelao hitsinkafona eto ny voditongotrao. Tsindrio ny voditongotrao ary avy eo mitroka ny Misintona ny foitranao ary mifoka rivotra miverina, manohitra ny faniriana hanafainganana azy.
Raha ny marina dia tazomy ho tsara sy miadana. Ampifanaraho amin'ny fofonaina ny fofonaina ary ny moka amin'ny fofonaina. Ary izany no yoga.
Miaina anaty fofonaina lalina, miaina. Mba hahafahanao manakimpy ny masonao. Tazomy ny vozonao amin'ny tsipika mahitsy mahitsy eto ary mifindra amin'ny dianao manokana.
Mitsikia. Tsy misy clenching amin'ny volomaso, amin'ny valanoranony. Mety tsy ho lasa lavitra ny ahy ny voditongotra.
Afaka tonga teto fotsiny ianao alohan'ny hiarovan'ny lamosinao ambany, ary zavatra tsara izany. Mety ho toa izao ny anao. Ary rehefa mandeha ny fotoana dia ho afaka hidina bebe kokoa isika.
Mifikitra aminy. Mialà sasatra raha ilaina. Tsara ry namako sakaiza, mbola hanao roa hafa isika.
Mifoka rivotra. Mivoaha avy. Ny farany.
Avelao aho handre ny fofoninao. Oh, vorona maromaro vao nandalo. Fotoana tonga lafatra.
Ary avy eo mitsangana aho ary mamela. Avelao ny sandrinao, esory ny pad ary aondrinay ao an-tratranay ny lohalinay. Jereo hoe inona no mahatsapa tsara eto, miforà moramora amin'ny lafiny iray, na angamba manety ny oronao hatramin'ny lohalinao.
Nahavita izahay! ny tongotra mankamin'ny tsihy. Ampitao ao ambadiky ny lohanao indray ny rantsan-tànanao. Raha te hanao yoga kely ho an'ny ati-doha ianao, atsipazo ny hazofijaliana, mifanohitra amin'ny ankihiben-tanana, ary averinay miverina any ambadiky ny lohany indray izy ireo.
Kiho tsara sy malalaka. Makà segondra iray hamafana ny tongotr'y solo-drizotra indray mandeha, mifoka rivotra. Tsara be eto, tena tsara.
Tena midina ny lohalika ankavanana ary avy eo mamaky ny afovoany. Ny otra Booty kely iray rehefa tonga eo afovoany isika ary mitondra azy miankavanana. Tsara, eny.
Mandehana midina amin'ny lohalika ankavia. Mahatsapa izany fihenam-bidy lehibe rehetra izany sy amin'ny abs. Eny, manindry i Elbo.
Ary avy eo miverina eo afovoany isika. Okay! Andao handeha ry namako yogi, bisikileta yogi. Miaina ao anaty.
Exhale. Atsangano indray ny lohalinao. Tadiavo ny oroka mamy amin'ny ambany indray amin'ny tany.
Ary avy eo dia hiaina miaina indray isika, mifoka rivotra. Atsangano ny loha, tendany, soroka. Mifoka rivotra.
Exhale. Kiho ankavanana miankavia. Halava ny tongotra havanana.
Aza hadino ny tratranao, misokatra ny fonao eto, noho izany dia tsy mikorontana izahay fa mitazona an'io voankazo tsara io eo anelanelan'ny saonay sy ny tratranay. Miaina ao anaty rivotra.
Miverina any afovoany. Mandrosoa indray. Ary manaova fofonaina, mihodina.
Kiho ankavia mankany amin'ny lohalika ankavanana ary ahitsy isika. Tadiavo ny fifandraisana eo amin'ny voditongotra. Mitsofoka mankamin'ny afovoany.
Ary ankehitriny dia mihazakazaka haingana kokoa isika. Mivoaka, miolakolaka. Mandrosoa afovoany.
Mivoaka, miolakolaka. Mifoka rivotra, afovoany. Niakatra i Navel.
Mivoaka, miolakolaka. Mifoka rivotra, afovoany. Mivoaha, mihodina.
Ankehitriny 'dia hihetsika hampiakatra avo roa heny ny fotoana. Mitsikia. Alao an-tsaina ny hira tianao indrindra.
Ataovy malemy foana ny rantsantananao. Azonao atao aza ny mamela azy ireo eto. Mihetsika, mihetsika, mihetsika isika.
Mitadiava fofonaina. Avelao izahay hanao anay folo segondra. Eto.
Ary navelanay handeha. Miampita ny ankavananao amin'ny ankavia. Raiso ny sisin'ny tongotrao.
Manomboha mihifikifi-kely avy eo aloha ka hatrany aoriana. Maka fahafinaretana! Mandrosoa sy miverina, manotra ny hazondamosinao Ary avy eo dia hihorakoraka hatrany amin'ny toerana mahafinaritra isika, izay hipetrahanay mitsangana ary hijerena ny fofonaina. Tiako ny mampiofana ireo hozatra ireo, noho ny antony mazava, fa koa noho ny fanazaran-tenako yoga.
Afaka mizaha bebe kokoa aho. Arakaraky ny habetsaky ny hery haoriko, indrindra amin'ny atiny sy ivon-toerako no vao manomboka manidina amin'ny mizana sandry aho dia mahatsapa ho tsara kokoa ny lamosiko isan'andro. Sokafy ny sainao raha momba ireo hozatra ireo.
Mijanona ho tsara. Mora ny midina ary mahatsapa hoe, 'Ah, tsy misy fanantenana ho ahy!' na mba lasa variana be. Ary noho izany mijanona eo fotsiny.
Mandohalika ny felatanana. Hiaina ao anaty isika. Alefaso mandroso ny fo.
Miaina mivoaka manodidina ny hazondamosina, saoka hatreny amin'ny tratra. Miaina ary mivezivezy anaty faribolana. Exhale, Chin ka tratra ho.
Miaina, mivoaka ny fo. Ary manaova fofona, ahodina ny faribolana. Tena mikendry ny vavoninao eto.
Alao an-tsaina ange ny iray amin'ireo mpitrandraka kafe efa taloha izay mifindra avy eo afovoanao. Ary avy eo hiverina eo afovoany isika, handevina ny faladianao amin'ny tany. Rantsantanana mandroso.
Izahay dia manao an'ity karazana zombie ity na ity hetsika 'thriller' ity rehefa mihodina miadana ny abs. Maninona raha miala voly kely Andao hanao 'mampientam-po'. 'Olon-kafa.
Mihodina miadana. Eny, eny. Okay, hetsika farany ary avy eo dia vita isika! Ary azonao atao ny manampy ny fanazaran-tena ary manohy, na afaka mijanona ao Shavasana ianao, iray izay ataoko.
Fa horaisinay izany. . ity sakana ity rehefa ananantsika.
Raha tsy manana pad ianao dia aza manahy. Averinay any aoriana ny lohalika. Ary amin'ity indray mitoraka ity dia handefa ny tongotra havanana aho g.
Hoentiko ambanin'ny ankavia ny sakana, ary avy eo hihodina aho toa manetsiketsika basikety eo anelanelany. Mba hampitomboana ny tsatoka dia hiaina aho, hiaina, hampiakatra ny lohako, tendako ary soroko. Mandalo.
Manana karazana iray ianao, karazany roa. Tohizo fa tsara. Safidy telo dia ny hiditra amin'ny Navasana bebe kokoa, hampiakatra ny tenanao amin'ny alàlan'ny hazondamosina ary hiasa eto, Adriene? Nilaza aho fa tsy nanana sakana! 'Azonao atao izany amin'ny zavatra rehetra.
Tsy amin'ny telefaona findainao. Andao tazomy hivoaka ny telefaonintsika. Saingy azonao atao izany amin'ny zavatra rehetra na afaka miasa amin'ny hety fotsiny ianao.
Raha tsy manana sakana ianao dia afaka miasa amin'ny hety. Ka alao alao sary an-tsaina hoe mandeha indray ity sakana ity. Handeha amin'ny safidinao miovaova izahay mandritra ny 10 fofonaina eto.
Ka mety manaratra ny tongotrao fotsiny ianao. Rofia eo ambanin'ny vodiny. Angamba manana ny sakananao ianao ary mandeha amin'ny ambaratonga voalohany.
Yoga kely ho an'ny ati-doha. Miala tsiny fa ity dia ambaratonga 1. Amin'ny ambaratonga faharoa na fahatelo, ity fiovaovana Navasana ity. Handrehitra afo ao an-kibonao izany, tsy maninona! Ooh, Neny! Andao handray fofonaina dimy hafa any amin'izay misy anao foana, sakano ianao na tsia.
Mialà sasatra raha ilaina. Fofon'aina efatra hafa. Ary avy eo tsy manisa aho ary tsy manao 10 segondra, 30 segondra matetika, fa indraindray mahafinaritra ny manana teboka farany fotsiny.
Andao maka rivotra hafa. Ary halleloo! Atsaharo ny sakana; nanao asa tsara ianao androany. Aorian'izany dia afaka miditra any Shavasana eo noho eo ianao, na afaka mihodina ianao ary manazatra pose goaika izao rehefa nampavitrika ny abs ianao, na mandanjalanja ny sandry amin'ny sisiny na zavatra mahafinaritra, noho izany dia mirary tontolo andro tsara daholo.
Ny yoga ve dia fampihetseham-po lehibe?
Tsy mila mankany amin'ny gym fotsiny ianao vao hatanjaka ny anaofototrahozatra.ny yogadia tenatsarafitaovana hidirana amin'ny fanatsarana ny tanjaka ao aminaoFaritraary miverina. Mety hieritreritra ianaony yogakilasy miadana sy misaintsaina na misy fihetsika mihetsika avy amin'ny paozy.17 feb 2020
Afaka manazava ny vatanao ve ny yoga?
Eny,ny yogaasanas willtononkira ny vatana, fa izy ireo dia tsy fomba iray fotsiny hampihena ny lanjany rehefa mifantoka amin'ny lafiny lalindalina kokoa izy ireonyvondrona hozatra miasa tsara. “Maherytonedhozatra atnyfototrany vatanaotohano ny fahasalamana.3 feb 2017
Moa ve ny yoga manampy abs pack 6?
Adinoy ny sit-up sy ny crunches, ary andramo ireo maheryny yogaasana hahazoana ireoenin--fonosana abs. Ankoatry ny fanodinana ny anaoFaritra, ireo pose ireo dia afaka manamafy ny hozatry ny tratra, ny soroka, ny sandry, ny tongotra, ny lamosina sns Eny, henonao tsara izany,ny yogaafakaVonjeomanangana ianaoenin--fonosana abs, miampy manome fahafaha-mandanjalanja bebe kokoa ny vatanao.9 Jona. Feb 2020
Tsy maninona ve ny fanazaran-tena abs isan'andro?
Ampiofano nyFaritraisaky ny andro
Toy ny hozatra hafa, nyFaritramila fiatoana koa! Tsy midika izany fa tsy azonao atao ny mampihetsika nyFromhozatra mandritra ny fanafanana anao miarakafanazaran-tenatoy ny Planks, Inchworms, ary fifandanjana hafa sy fanamafisanafanazaran-tena, fa tsy tokony hampiofaninao izy ireoisan'andro.27 Mey 2019
Afaka mahazo fonosana 6 ve aho afaka 2 volana?
Mahazo enina-fonosana abs ao anatin'ny roa volanadia azo atao amin'ny fomba kendrena amin'ny sakafo sy ny fanatanjahan-tena. Tsy maintsy mihinana sy misotro ianao amin'ny alàlan'ny fitomboan'ny hozatra ao an-tsaina aryAzafanatanjahan-tena natao hiasa nyFaritraary atsonika ny tavy amin'nyFaritraka hita kokoa izy ireo. r.
Manampy amin'ny fampihenana ny tavy amin'ny kibo ve ny yoga?
manaony yogamety koaVonjeomampivelatra ny hozatra ianao arymanatsarany metabolismanao. Mandritra ny famerenana amin'ny laoninyny yogaTsy karazana ara-batana indrindrany yoga, mbolaMANAMPYamin'ny fihenan-danja. Ny fandinihana iray dia nahita izany famerenana amin'ny laoniny izanyny yogadia nandaitra tamin'nymanampyvehivavy matavy loatra mba hahavery lanja, ao anatin'izanytavy kibo.
Tena miasa ve ny yoga?
SAINGYyoga'sregimen feno ny kiboasamanampy mihoatra lavitra noho ny kibo mafy orina sy fisaka. Satria ny hozatry ny kibonao dia manohana ny fihodinan'ny hazondamosina, matanjakafototrasamy afaka manatsara ny fihetsika ary mampihena ny fanaintainan'ny lamosina.28 Aogositra 2007